Union Minister U Kyaw Tint Swe meets US Secretary of State – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister U Kyaw Tint Swe meets US Secretary of State
Union Minister for the Office of the State Counsellor U Kyaw Tint Swe met United States Secretary of State Mr. Michael R. Pompeo at Lotte New York Palace Hotel in New York, United States on 27 September.
During the meeting, they exchanged views on resolving the Rakhine issues, bilateral diplomatic relation and future cooperation processes.
Also present at the meeting were Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin, Myanmar Ambassador to the United States U Aung Lin, Under Secretary of State for Political Affairs Mr. T.H. David Hale and Principal Deputy Assistant Secretary for East Asia and Pacific Affairs Mr. Patrick Murphy.
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံ
(၂၉-၉-၂၀၁၈ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့)
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Michael R. Pompeo ၏ မေတ္တာရပ်ခံမှုဖြင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေသည် ၂၇-၉-၂၀၁၈ ရက်၊ ညနေ ၁၇၀ဝ နာရီခန့်တွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ Lotte New York Palace Hotel သို့ သွားရောက်၍ ၎င်းအား တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် ရခိုင်အရေးကိစ္စကို ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး အပါအဝင် အနာဂတ်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများအပေါ် ဆွေးနွေး အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေနှင့်အတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးအောင်လင်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့် အတူ Under Secretary of State for Political Affairs ဖြစ်သူ Mr. T.H. David Hale နှင့် Principal Deputy Assistant Secretary for East Asia and Pacific Affairs ဖြစ်သူ Mr. Patrick Murphy တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။